Medical Imaging Solution ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် C-band 1550nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ် - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Optic module တွေ > Broadband အလင်းရင်းမြစ်များ > Medical Imaging Solution သည် 1550nm ASE Broadband Light Source ဖြစ်သည်
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Imaging Solution အတွက် 1550nm ASE Broadband Light Source ကိုသင့်အားပေးလိုပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးပြီးနောက်ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီပေးပို့လိမ့်မည်။
Medical Imaging Solution အတွက် C-band 1550nm ASE Broadband Light Source ၁ ၏နိဒါန်း
Optical fiber ASE broadband light source module သည် spectral flattening technology ကိုအသုံးပြုသည်။ output power သည်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အလင်းအရင်းအမြစ် module ၏အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်လွယ်ကူစေရန် RS-232 interface နှင့် host computer software များကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Imaging Solution အတွက် 1550nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်၏ ၂- သွင်ပြင်
၃။ Medical Imaging Solution အတွက် C-band 1550nm ASE Broadband Light Source အသုံးပြုခြင်း
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Imaging Solution အတွက် 1550nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်၏ C-band ၏ 4. Optical-Electrical လက္ခဏာ
လှိုင်းအလျား operating nm 1528 ~ 1563 ကို C Band
output ကိုပါဝါ mW 10/20/50/100
ပါဝါချိန်ညှိနိုင်သည် (optional) - ညှိနှိုင်းမှုအကွာအဝေး 10% ~ 100% စဉ်ဆက်မပြတ်ရောင်စဉ်တန်းပြား
ရောင်စဉ်တန်းပြား dB 1.5 (Typ ။ ),2(မက်စ်။ )
output ကိုအထီးကျန် dB > 35
DC က 5V, <15W အပိုင်း
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Imaging Solution အတွက် 1550nm ASE Broadband အလင်းရင်းမြစ်၏ ၅။ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
C-band ASE ရောင်စဉ်။
ပါဝါချိန်ညှိနိုင်သည့်ဗားရှင်း C-band ASE ရောင်စဉ် (၁ မှ ၁၀ မီဂါဝပ်ချိန်ညှိနိုင်သည်)
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Imaging Solution အတွက် 1550nm ASE Broadband အလင်းအရင်းအမြစ်ကို C-band ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
Q: အထုပ်အတိုင်းအတာအကြောင်း, သင်လိုအပ်ချက်ရှိပါသလား?
hot Tags:: C-band 1550nm ASE Broadband Light Source ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖြေရှင်းခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်။